MAHAFINY Aerospace Fletcher FU24 950 Series FSX & P3D - Rikoooo
Mpahay siansa, Fletcher FU24 950 Series FSX & P3D Version 3
Downloads 16 238
Mpanoratra: Deane Baunton
Navoaka tamin'ny 23 / 06 / 2019: Version 3
Fletcher FU24 modely 950 amin'ny 954, mifanaraka FSX ary Prepar3D v4 + (voamarin'i Rikoooo). Fanampiny mahatalanjona tena tsara. Fisaorana lehibe ho an'ny mpanoratra azy Deane Baunton noho ny asa vita tsara.
The Fletcher dia ny fiaramanidina voalohany natao manokana ho an'ny asa fampielezana ny fambolena any Nouvelle Zélande. Io fiaramanidina io dia ahafahanao manidina amin'ny toerana avo ambany. Nahoana? Satria afaka manidina amin'ny kibay 40 ianao raha tsy mijanona, dia mivoaka avokoa ny rehetra. Mba hanomezany hevitra anao, manam-pahaizana manokana ao amin'io sehatra io, ny Piper J3-CUB, dia mitantana ny mpihazona 35.
Ny fanampiana dia avy amin'ny modely efatra ahitana karazana virtoaly virtuosiarna feno tanteraka sy farany, miaraka amin'ny famahana ny 3D. Ny fampisehoana ny fiaramanidina sy ny fanatanjahantena dia tena lavorary! Ny endriny dia tonga amin'ny endriny efatra. Ny fahaiza-mandanjalanja tsara indrindra amin'ity fiaramanidina ity dia hahatonga azy ho namana tsara indrindra hikaroka ny manodidina ny simulator anao. Ny radio (telecommunication radio) (COMM1) dia eo ankavian'ny fiaramanidina. Ny fahazavana dia mihodina aloha.
Ny fiaramanidina dia marefo loatra ka afaka mamaky ny soratry ny lalana ny mpamilin'ny New Zealand.
Ampidino haingana ireo lesona ary ankafizo tokoa!